Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Diyaaradaha korontada iyo bumblebees ma duuli karaan
Aviation • Safarka Ganacsiga • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Wararka kala duwan
Diyaaradaha korontada - sida bumblebees?
Muddo tobanaan sano ah ayay theoreticians -ku caddeeyeen in bumblebees aysan duuli karin oo ay aad uga xanaaqeen inay sii wadaan duulimaadka - iyagoo adeegsanaya isla'egyo kala duwan. Inta badan wax la mid ah ayaa ka dhacaya diyaaradda baatariga-korontada ee baalka leh. Waxay u malaynayeen inaysan macquul ahayn, laakiin in ka badan boqol ayaa halkaas jooga oo leh ku dhawaad ​​1000 oo amar ah.
Kuwani way yar yihiin sidaa darteed xitaa uma baahna mabda'a cusub ee duulista.
Waxay kaliya nuqul ka yihiin habka Tesla oo baabuurta hoos ku leh.
Warbixin ay soo saartay IDTechEx, “Diyaaradda Korontada ee Dadku: Magaalada Smart iyo Gobolka 2021-2041,” diyaaradahan baalka korontada ah iyo sidoo kale falanqaynta qaab-dhismeedka cusub ee korontada ee tooska ah ee tooska ah iyo nashqadaha diyaaradda ayaa faahfaahsan.
Kooxda martigelinta yar yar badiyaa way tarmaan. Laba 10% hagaajin ayaa ka faa'iideysanaya 21% doorashada xulashada waa mid aad u ballaaran. Dadku waxay si khaldan u maleeyaan in Tesla uu ka helayo kala duwanaansho batteri ka fiican, laakiin sidoo kale waa muhiim in si badbaado leh batteriga loogu sii wado xuduudkiisa, laga tirtiro kumanaan qaybood, iyo faahfaahin kale. Range ayaa xitaa aad loogu jecel yahay diyaarado yaryar maxaa yeelay kala duwanaanshuhu waa qodob badbaado, sidaa darteed duuliyayaashu sidoo kale waxay raadsadaan 0.2 cillad jiidis, iyagoo baabi'inaya hal kiiloomitir oo xarig ah, boqolaal qaybood, iyo matoorro aan fiicnayn iyo koronto koronto.
Iyagoo wajahaya xaqiiqda, kalkaaliyaasha diyaaradaha yar yar ee korontada hadda waxay u jeediyaan dareenkooda weyn diyaaradaha korontada iyo ka-qaadis toosan oo aan macquul ahayn. Waxay leeyihiin waxoogaa dhibic ah, maxaa yeelay waxaan hadda ku jirnaa xilli doqonimo ah halkaas oo soo jeedino badan oo aan caqli-gal ahayn ay soo jiitaan lacag ka timid maalgashadayaasha indho-xiran ee rajaynaya Tesla soo socda. Farshaxan-yahannadu waxay ku saxnaayeen inay tilmaamaan in hal naqshad oo leh maroojin ku taal caarada baalal kasta oo aysan jirin wax dhex-yaal ah oo iska soo tuuraya samada markii mid guul-darraysto. Waxay ku saxsan yihiin inay ka digtoonaadaan in qaybaha hadda la heli karo, VTOL badan oo cilladaysan ay samada ka soo dhici doonaan 60 daqiiqo ka dib marka ay duusho - ma liicdo oo xataa ma aha in baarashuud la geeyo dhererkaas. Dhaqaalaha tagaasida hawada ee magaalada ayaa si sax ah su'aal looga keenay warbixinta, "Taksiyada Hawada: Ka-qaadista Korantada Tooska ah iyo Soo Degista 2021-2041."
Kuwo badan ayaa u soo jiidaya VTOL oo leh baalal go'an, si ay ugu duuli karaan sida diyaaradaha caadiga ah inta badan, u adkaystaan ​​muddo dheer, iyo, mararka qaarkood, inay ku siibtaan xaalad degdeg ah. Mid ka mid ah tusaalaha waa bilowga Boqortooyada Midowday (UK) Vertical Aerospace oo dul sabaynaysa $ 2.2 bilyan ka dib Virgin Atlantic iyo American Airlines oo amarro siinaya 1,000 ka mid ah VTOL-baalkeeda go'an-dhowr bilyan oo doollar in kasta oo aanay weli hawada ku jirin.
Helikobtarrada isbarbar dhiga ayaa si dabiici ah ugu waxtar badan duulimaadka tooska ah laakiin aan lahayn dabacsanaan aan badnayn iyo xasilloonida dabaysha. Waxay gacan ka geystaan ​​sidii loo dhisi lahaa dhismayaasha dhaadheer, iyagoo hal mar dul dul heehaabaya. No VTOL batari ma sameyn karo taas: waa inay wax ka qabtaan kiisaska meeriska ee ugu yar.
Ku soo noqoshada duulimaadka caadiga ah iyo soo degitaanka diyaaradda baalasheeda go'an, waxaa jira xisaabin u eg bumblebee oo ka digaya in mid ka mid ah qorshayaashii 8- ilaa 100-kursi ee la ballanqaaday 2026-2030 uusan duuli karin. Waxay adeegsadaan isla'egyo khaldan maxaa yeelay 2 waxay adeegsadaan mabda'a aad u kala duwan ee saamaynta dhulka qaar kale oo badanna waxay adeegsadaan mabda'a cusub ee DT -ka la qaybiyey, oo ay ku lug leeyihiin fidiyayaal badan oo ku yaal garabka. DT waxaa loola jeedaa in lagu qaybiyo daboollada iyo boqolley badan oo culeys ah, meel bannaan, qiimaha maaddada, jiidista, iyo dhererka dhabaha diyaaradda. NASA iyo DLR xisaabinta iyo tijaabooyinka ayaa taa taageera. United Airlines ayaa qorshaynaysa in ay soo saarto diyaaradaha korontada marka la gaaro 2026.
Naysayers -ku sidoo kale waa khaldan yihiin sababta oo ah waxay iska indho -tiraan habka “wax kasta oo yar wax u taraya” ee diyaaradda weyn. Tusaale ahaan, diyaaradaha gobolka ee maanta wasakhaysan waxay leeyihiin 30 km oo xarig ah iyo cillad jiidis liidata laakiin mid koronto ku dhalatay ayaa la mid ah Tesla. Qiyaasta Tesla waxay si weyn uga timaaddaa bareega dib -u -soo -nooleynta oo u dhiganta diyaaraduhu waa soo -saareyaal dib -u -rogaya dhaadhaca iyo giraangiraha dib -u -soo -caga -caga -dhigashada. Runtii, giraangiraha ku shaqeeya waxay ka dhigi karaan taksi diyaaradeed oo koronto ah iyo ka -qaadisteedu si hufan.
Aynu tixgelinno hal tusaale. Bye Aerospace waxay leedahay in ka badan 720 amaro- in ka badan $ 250 milyan, iyada oo gaarsiinta la bilaabayo- laga bilaabo iskuulada duulaya iyo wadayaasha tagaasida hawada ee loogu talagalay 2-iyo 4-kursi ee diyaarada baytariga aad tijaabin karto duuli maanta. Waxay dhowaan ku dhawaaqday 8 rakaab ah oo ah rakaab-koronto oo batrool ah isla garoonka “ugu hooseeya qiimaha-lahaanshaha”, laakiin baaxadda 500 nm (raran) ayaa lagu dhawaaqay inay ku tiirsan tahay iskaashi lala yeesho Oxis Energy batteriga cusub. Naysayers -ka ayaa qoslay markii Oxis isla markiiba caloosha kor u qaaday. Si kastaba ha noqotee, shirkadda weyn ee LGChem waxay ku jirtaa waqti isku mid ah si ay u siiso baytar la mid ah oo, sida Tesla, Bye waligeed kuma tiirsanaan hal batteri. Waxay qabtaan shaqada xanaaqa dhammaan hagaajinta yar. Dhinacyada soo socda ee qeexitaanku waxay muujinayaan qaar ka mid ah tan iyo sidoo kale astaamaha badbaadada badan oo ka baxsan xitaa qulqulkeeda dheer, nidaamka autolanding -ka degdegga ah iyo baarashuudka diyaaradaha.
Naqshaddan eFlyer 800 gabi ahaanba waa cusub tahay caarada ilaa dabada. Waxtarka Aerodynamic waa laba jibaar ka mid ah diyaaradaha turboprop ee dhaxalka caadiga ah ee cabbirka la midka ah-guud ahaan wax-ku-oolnimada-nidaamka hufnaan leh oo leh hufnaan sare oo leh jiidis qabow oo hooseysa, 2 matoorro koronto oo baalal leh mid walba oo leh dabaylo laba-laabma ah iyo baakadaha afar geesoodka ah. Kororka baaxadda leh ee dhexdhexaadka ah waxaa laga bixiyaa ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar u ah qorraxda (laga yaabee in dayax-gacmeedkii ay tijaabiyeen-wuxuu soo saaraa labanlaab korontada baabuurta cadceedda ee maanta iyo taksiga korontada ku shaqeeya).
Jet It, iyo JetClub, oo ah shirkado walaalo ah oo iska leh saamiyada Waqooyiga Ameerika iyo Yurub, siday u kala horreeyaan, ayaa u kala saxeexday heshiis iibsi balaayiin doolar ah oo loogu talagalay raxan diyaarad eFlyer 800 ah. Intaa waxaa dheer, L3Harris Technologies iyo Bye Aerospace waxay saxiixeen heshiis lagu horumarinayo dhammaan korontada, kala duwanaanshaha hawlgalka oo bixin doona sirdoonka, ilaalada, iyo awoodaha sahanka (ISR).
Waqtigan xaadirka ah, Bye Aerospace ma sameyneyso buunbur leh mabda'a cusub ee duulista, laakiin waxay ku dari kartaa kicinta la qaybiyey waqtiga ay dooratay. Dhanka kale, dhammaan dayuuradaha batteriga korontada ku socdaa si ka dhakhso badan bay u wasakheeyaan kuwa dabada kaxeeya sida Teslas si dhaqso leh u dardargeliso. Kaliya ka taxaddar inaad tiraahdo ganacsi batteriga korontada ku shaqeeya-ama diyaarad goboleed ma duuli karto. Waxaa jira buunbeer kor kaaga dhoolacadeynaya.